ဗိုလ်ထက်မင်း | MoeMaKa Burmese News & Media
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဒီမိုကရေစီက နုနု၊ မုန်တိုင်းက ထန်ထန် – အပိုင်း(၅) (မိုးမခ) သြဂုတ် ၃၁၊ ၂၀၁၅ ၃၆။ ဦးရွှေမန်းရဲစိတ်ထဲမှာ ဥပဒေပြုအာဏာအထက်မှာ မိုးကောင်ကင်ဘဲ ရှိတယ်လို့ခံယူထားသလို...
ဗိုလ်ထက်မင်း – မိုးမခ ဒီမိုကရေစီက နုနု၊ မုန်တိုင်းက ထန်ထန် – အပိုင်း (၃) (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၈၊ ၂၀၁၅ ၁၉။ အခြေခံဥပဒေသဘောအရ သမ္မတကို power...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဒီမိုကရေစီက နုနု၊ မုန်တိုင်းက ထန်ထန် အပိုင်း (၂) (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၆၊၂၀၁၅ ၈။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိူင်ဟာ ၁၉၉၅ခုနှစ်တပ်ရင်းမှူး၊ ၁၉၉၉ခုနှစ်ဗျုဟာမှူး၊ တပ်မ(၄၄)တပ်မမှူး၊ စစ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းအုပ်ကြီး၊...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ဒီမိုကရေစီက နုနု၊ မုန်တိုင်းက ထန်ထန် အပိုင်း(၁) (မိုးမခ) သြဂုတ် ၂၃၊ ၂၀၁၅ ၁။ စာရေးသူအနေနဲ့ ထိပ်သီးခေါင်းဆောင်များ အားပြိုင်နေကြတဲ့ ဆောင်းပါးရေးဖို့ ပြင်ဆင်ဆဲမှာပင် နော်ဝေးနိုင်ငံမှ မိတ်ဆွေတဦးက...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း (၅) နိဂုံး (မိုးမခ) ဇွန် ၄၊ ၂၀၁၅ ၂၅။ ကိုးကန့်တိုက်ပွဲသတင်းတွေ နံမည်ကြီး ပြန့်နှံနေတာ...
Photo – Irrawaddy, April 10, 2015, Nay Pyi Daw ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၄) (မိုးမခ)...
ဗိုလ်ထက်မင်း – ကိုးကန့် MNDAA စခန်းတွေကို တိုက်ပြီးရင် ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲ ? အပိုင်း(၃) (မိုးမခ) ဇွန် ၂၊ ၂၀၁၅ ၁၃။ တရုတ်အစိုးရအနေနဲ့လည်းမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စဉ်တွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေရာယခင်အစိုးရ လက်ထက်က အမွေဆိုးစီမံကိန်းများကို လက်ရှိအစိုးရသစ်ရဲ့ ကိုင်တွယ်နေပုံတွေအား...